Iibinta Is-Adeegga ama Qiime-Ku-saleysan Qiime - Weli Waa Khibraddii | Martech Zone
Jimcaha, Sebtember 9, 2016 Khamiista, Sebtember 22, 2016 Douglas Karr
Xalay, waxaan kaqeyb galay munaasabad ay dhigaysay PactSafe. PactSafe waa madal qandaraas elektiroonig ah oo qandaraas ku shaqeeya daruur ku dhisan iyo clickwrap API loogu talagalay Saas iyo eCommerce. Waa mid ka mid ah barnaamijyada SaaS ee aan kula kulmay aasaasaha markii uu kor u kacayay oo hadda aragtida Brian hadda waa run - aad u xiiso badan.
Gudoomiyaha munaasabada ka hadlay ayaa ahaa Scott McCorkle ee caan ku ah Salesforce halka uu ka ahaa Maamulaha Guud ee Iibka Suuqgeynta Salesforce. Waxaan ku qancay u shaqeynta Scott ee Salesforce, waxayna ahayd khibrad waxbarasho oo weyn. Scott wuxuu ka mid ahaa hogaamiyaashaas marwalba helaa dariiq lagu dhaqaajiyo badeecada iyo shirkada horayba inkastoo jidgooyo kasta ay kujirto wadada - aadanaha ama farsamada.
Mid ka mid ah qodobada uu sameeyay Scott intii uu socday wuxuu ahaa in tiknoolajiyadda ay si xawli ah u sii yaraanayaan muhiimada ay leedahay, iyo waayo-aragnimada macaamiisha cirka isku shareeray. Waxaan ku yeelannay kalfadhiyada kala-jajabinta miisaskayaga halkaas oo Scott wadaagay sheeko kadib sheeko meesha ay tan ka dhacday macaamiisha Salesforce iyo ExactTarget.
Qiimaha Dadweynaha iyo Qiimaynta Ku Salaysan Qiimaha
Wadahadalku wuxuu u rogay dood ku saabsan qiimaha dadweynaha iyo iibka iskaa wax u qabso ee ka soo horjeedka iibka dibadda iyo qiimaha qiimaha ku saleysan. Markii aan ka soo shaqeeyay SaaS labada noocba, waxaan la wadaagay waayo-aragnimadayda mid kasta. Waxaan sidoo kale ku dhiirrigaliyay miiska inaan soo dejiyo oo aan akhriyo ebook-ka Mike McDerment ee Buugga Freshbook, Jebinta Caqabada Waqtiga (waa bilaash)
Qiimaha go'an wuxuu u baahan yahay maalgelin ama faa'iido weyn si loo kiciyo koritaanka shirkadda. Haddii aadan haysan wax muhiim ah, waxaad ku kori doontaa si dabiici ah. Taasi way fiicnaan kartaa haddii aad rabto shirkad ula kac ah, koboc aan deyn lahayn. Laakiin koritaanka qunyar socodka ahi wuxuu la yimaadaa khataro. Xilliga caqabadda gelitaanka ee raadinta xalal ka raqiisan ama aad adigu dhisayso ay noqonayso run weyn, ayaa suuqu ku mari karaa. Haddii aad maanta wado barxad SaaS ah, fursadaha ayaa ah inaad u baahan tahay inaad garaacdo inta birtu kulushahay. Sida Scott u dhigay, waa inaad diyaar u ahaato inaad sankaaga dhiig ka dhigto.
Qiimaha ku saleysan qiimaha waxay ku siineysaa fursad aad ku kasbato macaash badan adoo u oggolaanaya macmiilkaagu inuu qiimeeyo badeecadahaaga iyo adeegyadaada halkii aad ka qiimeyn lahayd. Qiimaha go'an wuxuu noqon karaa tartan xagga hoose ah haddii tartamayaasha ay soo baxaan - taas oo ay badiyaa sameeyaan. Qiimaha ku saleysan qiimaha wuxuu ku siin karaa margin iyo raasumaal aad u isticmaali karto koritaanka. Kala duwanaanshaha ku saabsan waxa shirkadaha qaar ay shatiga u siinayeen shirkadda ExactTarget shirkadaha kale waxay ahayd mid aad u sarreysa xilliyada qaarkood. In kasta oo ay jireen khadadka aasaasiga ah qofna laguma dhiirrigelin inuu hoos tago, saqaf ma jirin. Markaa shirkadaha maaliyadeed ee shirkadaha caalamiga ah ayaa laga yaabaa inay ku bixiyaan wax ka badan fariin kasta oo ka yar ganacsiga yar ee la saxiixay maalintii ugu dambeysay ee iibka.
Warshadaha emailku waa iskudhaf labada xeeladood. Ciyaartoyda sida Mailchimp waxay lahaayeen moodallo qiimeyn dadweyne ah, halka shirkadda ExactTarget ay leedahay qiimeyn ku saleysan qiime. Labada shirkadoodba way ku qarxeen koritaanka iyada oo ay ugu wacan tahay alaabooyin waaweyn iyo adeeg la yaab leh - laakiin ugu dambeyntii ExactTarget ayaa ku guuleysatay tartanka, iyada oo liqday suuqa ganacsiga oo ay iibsatay Salesforce. Faa'iidooyinka ku saleysan qiimaha iyo kobaca iibka gardarrada ah ayaa sii huriyay maalgashi dheeraad ah shirkadda - inta soo hartayna waa taariikh.
Aaminaad iyo Awood
Horaan uga hadlay in suuqgeynta internetka uu u baahan yahay kalsooni iyo maamul labadaba. Sheekada Mailchimp vs ExactTarget, labadaba waxaa aqoonsaday warshadaha. ExactTarget waxay si adag u shaqeysay si ay aqoonsi uga hesho warbixinnada warshadaha sida Gartner iyo Forrester. Waxa kale oo ay shaqaalaysiiyeen dad daba socday RFP-yo waaweyn, Scott waxa uu la wadaagay sheeko ay ku guulaysteen 5 ka mid ah 5 RFP-yada kuwaas oo culayska saaray kobaca shirkadaha, laakiin halka ay ugu dambayntii ku guulaysteen. Sida ExactTarget ku guulaysteen macaamiil waaweyn, waxay awood u siiyeen noocyadaas si ay u helaan noocyo badan. Waxayna lahaayeen koox maareyn xisaabeed oo cajiib ah oo dhistay xiriiro waalan oo la aamini karo hogaamiyaasha warshadaha.
Xaaladda 'Mailchimp', waxay ku tiirsanaayeen iibinta is-u-adeegsiga, is-dhexgalka adeegsadaha ka sarreeya, summad madadaalo, iyo waaxda adeegga jawaabta leh. Xaqiiqdii, markii aan furay kuweenna Highbridge xafiiska, Waxaan ka helay sanduuq hadiyado qurux badan Mailchimp oo igu hambalyeeyay. Ma aanan maqlin wax ka yimid ExactTarget (taasi maahan dhaleeceyn, kuma aanan jirin liistada bartilmaameedkooda). Mailchimp wuxuu ka dhagaysan jiray baraha bulshada, wuxuu ii aqoonsaday inaan ahay qof wax saameyn ku leh, wuuna ogaa inaan iyaga u faafin doono iyaga.
Mailchimp iyo ExactTarget labaduba waxay u shaqeeyeen si ay u abuuraan khibrado macmiil oo gaar ah. Tiknoolajiyadu waxay ahayd mid aan faa'iido lahayn. Labada shirkadoodba waxay soo gudbiyaan fariin elektaroonik ah. Wax-soo-saarka ExactTarget iyo keenista goor hore waxay ahayd soo jiidasho weyn shirkadda oo ka timid macaamiisha ganacsiga, laakiin sannadihii u dambeeyay waxay ahayd maamulka xisaabaadka iyo awoodda lagu farsameeyo xalal aan macquul ahayn oo ku dhow macaamiisha caalamiga ah. Waxay lahaayeen awood, ka dibna waxay dhiseen kalsooni iyagoo helay shaqada.
Is-Adeeg ka soo horjeedka Kooxaha Iibka
Is-u adeegiddu waa waayo-aragnimo gebi ahaanba soo-gelaysa waxayna u baahan tahay summad la yaab leh iyo mawjad hirar ah oo wacyigelin ah oo khadka tooska ah ah. Haddii aad haysato wax soo saar aad u sarreeya, waad ku guuleysan kartaa suuqa. Waxaan rumeysanahay debcin ayaa tan sameeyay. Maaddaama aan leenahay qandaraaslayaal aan la shaqeyno oo ku jira ama ka baxsan mashaariicda, waxaan la yaabay markii ugu horreysay ee aan ka helo warqad ka socota Slack oo ay iigu soo celiyaan lacag isticmaaleyaasha aan soo hubin. Iska ilow barnaamijka; Waxaan jeclaa waayo-aragnimada. (Ma aha in lagu daro ku darista giphy kaas oo haysa qosolku qulqulayo maalinta oo dhan).
Slack sidoo kale wuxuu dhexgalay shirkadda. Taasi waa daacadnimo wax aannaan inta badan ku arkin madal is-adeegsi. C-Suite badiyaa way adag tahay in lagu dhex galo suuqgeynta bulshada iyo waxyaabaha la xiriira. Haddii macaamiisheennu ay rabaan inay wax ku iibiyaan C-Suite, waxaan caadi ahaan fiirineynaa fursadaha shaqsiyeed sida casho, shirar, iyo fursado kale. Slack waa ka reeban yahay laakiin wuxuu lahaa ujeeddo ujeeddo, waayo-aragnimo badeecad weyn, qiimeyn iyo qiime, iyo tan maalgashi oo abuurtay mawjad PR ah oo khadka tooska ah ku wareegtay. Taasi waa ficil adag oo la raaco.
Kooxaha iibka waxay leeyihiin isbeddelay. Waxaan ka wada hadalnay iibinta bulshada dherer ahaan, waxaadna arki doontaa warqad cad oo naga soo baxda goor dhow oo leh fursado tababar ah. Mid waa inuu xusuusnaadaa in safarka macaamiisha maalmahan uu ku riixay daqiiqada runta albaabka shirkadda. Qaar ka mid ah suuqleyda ayaa si qalad ah u aaminsan inay taasi ka dhigeyso dadka wax iibiya inay amraan kuwa wax iibsada. Hase yeeshe kuwa ka soo horjeedaa, dadka wax iibiya waa inay noqdaan kuwo fiiqan weligood maxaa yeelay rajo kasta waxay sameysay cilmi baaristooda waxayna kaliya la xiriirtaa dhamaadka wareegga iibsiga. Dadka wax iibiya uma joogaan inay wax baraan macmiilka; taasi badanaa waa la sameeyaa. Kooxdaada Iibka waxay u joogaan inay ka gudbaan caqabadaha ugu adag.
Kooxaha iibku badanaa waa isku dhaf tayo leh.
Kooxuhu waxay leeyihiin dad dhalinyaro ah, oo iibiyayaal cusub ah oo adag oo aan jawaab u haynin. Maaddaama aanan jeclayn gorgortanka, waxaan necbahay in la iga hor yimaado dadkan. Waan iska indhatiri doonaa wicitaanadooda iyo emaylkooda maalinta oo dhan maxaa yeelay badanaa waxay igula hadlaan alaab ama adeegyo aanan u baahnayn. Iibintani waxay ka dhigi kartaa rubucaagaaga, laakiin waqti kadib waxay burburin ku hayaan khibradaada.
Caqli badan, hogaamiyaasha warshadaha oo leh Rolodex macmiil oo buuxa oo ay ku iibin karaan si isdaba joog ah maxaa yeelay waxay kalsooni ku siiyeen iibsadayaasha shirkad kasta oo ay ka shaqeeyeen. Dadkan wax iibiya ayaa ah kuwa aan ugu jeclahay maxaa yeelay waxay gartaan qiimaha xalkoodu ii keeni karo, waxaanan ku kalsoonahay inay ku qiimeeyaan siday u baahan yihiin. Khatar uguma jiri doonaan inay i iibiyaan wax aanan u baahnayn sababtoo ah ma jebin doonaan kalsoonidaas. Oo iyagu waa kheyraad isku xirka haddii ay wax iga iibin karaan iyo haddii kale.
Dhammaantood waxay ku yimaadaan khibrada ganacsigaagu abuurayo. Taasi waxay noqon kartaa waayo-aragnimo la taaban karo iyada oo loo marayo shey sare, ama waxay noqon kartaa khibrad shaqsiyeed iyada oo loo marayo ilaha aadanaha ee aad gudaha ku haysato. Waqtiga intiisa badan, alaabooyinka is-u-adeeggu waxay u baahan yihiin tiro maalgashi ah oo ku saabsan waayo-aragnimada isticmaale, mana jiraan wax yar ama meel bannaan oo jahwareer ah maxaa yeelay isticmaalayaashaadu way ku doorteen maxaa yeelay iyagu ma aysan sameyn doonayaa qof la hadasho.
In kasta oo laga yaabo inaad lacag dhigato adoo yareynaya awoodda iibinta aadanaha, waxaad u baahan tahay inaad si weyn u maal gasho abuurista khibrad sare, kobcinta ereyga afka, iyo wacyigelinta xiriirka dadweynaha si aad hadalka u hesho. Taasi ma ahan mid raqiis ah. Hadana haddii aad si ba'an u qiimeyso barxaddaada si aad ugula tartanto suuqa, waxaa laga yaabaa inaadan haysan bidix kugu filan oo aad ku maal gashato suuqgeynta lagama maarmaanka ah.
Khibrad wax soo saar dhab ah oo ka sarreysa ayaa ka adkaan karta kharashyada suuqgeynta, laakiin taasi waa xurmada quduuska ah ee suuqgeynta wax soo saarka. Fursadaha ayaa ah, waxaad u baahan tahay inaad si fiican uhesho si aad u keento ilaha aadanaha ee lagama maarmaanka u ah ka-gudubka cilladaha kasta oo aad u xaqiijiso guusha macaamiishaada. Qiimaha ku saleysan qiimaha wuxuu noqon karaa xulasho ka fiican xaalado badan.
Tags: xujoawooda briansaxsanmailchimppactafesaasiibka wadayKordhinta IibkaiibinScott mccorklesaas iskaa wax u qabsodebcinkalsooniqiimahaqiimaha ku saleysan qiimaha
TidyMarketer: Suuq-geynta SaaS ee All-In-One Suuq ee loogu talagalay Ololayaasha Xayeysiinta
Xasan xasan (@xasan_xasan)
Sep 22, 2016 at 4: 33 PM
Farriin weyn, Doug. Waan jeclaanay inaan ku haysanno - waana oggolahay, sidoo kale waxaan u maleynayaa in qayb ka mid ah ay hoos ugu dhacayso kakanaanta qiimaha iyo rabitaanka in loo kobciyo shirkadaha bilaabay hal waddo laakiin laga yaabo inay leeyihiin shey ka habboon kan kale.
Sep 22, 2016 at 7: 19 PM